Ogaden News Agency (ONA) – Xeradii cadawga ee Anano/Dagmada Awaare oo cagta la mariyay shalay
Xeradii cadawga ee Anano/Dagmada Awaare oo cagta la mariyay shalay
Waxaa shalay oo tariikhdu ahayd 20-06-2011 Dagaal culusi uu ka dhacay magaalada Ananu ee degmada Awaare, dagaalkaas oo bilowaday 3dii galabnimo. Dagaalkan oo ahaa mid aad u kulul oo Soodhka la’isdaray ayaa socday ilaa iyo gabal dhicii.
Wararka hordhaca ah waxay sheegayaan in cadawga lagaga dilay 55 Askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyadoo ugu dambayntii laga qabsaday saldhigii Ananu. Waxaa lagafa furtay cadawga 55 Qori oo 3 ka mid ah ay yihiin qoryo waaweyn iyo 3ex Radio oo kuwa ciidamada lagu hago ah, Hal Telfoon oo nooca settalite ka ah ee loo yaqaano Thuraya ah. Waxaa kaloo laga furtay saanad aad u badan ookuwa ciidanka iyo sahay kala duwan oo fara badan.
Ciidankii cadawga intii hadhay nin nin raacay ma jirin iyagoo firxadkoodii uu CWXO iyo shacabka deegaanku ay ku raadjoogaan, waxaana lagu wadaa inuuna waxba ka nabad tagin xeryaha kalee ciqaabta shacabka ee ay ka deganyihiin gobolka Jarar iyadoo la filahayo in qaar badan nolol lagu qabto.